Ukubuyela emva kwezothando, isilwanyana esithandekayo iimbono ezimangalisayo kwi-wifi
I-Cae Canol Bach ibonelela ngothando oluthandekayo lokuhamba. Ume kumathambeka asezantsi entaba yeManod uya kurhangqwa ziimbono ezintle zeentlambo eziqukuqela ukuya ngaselwandle. Le ndawo yokufihla intloko ibonelela ngegumbi lokulala elinegalari ye-mezzanine ngaphezulu kwesicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala evulekileyo enesitovu esitshisa iinkuni, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela.
Sivumela izilwanyana zasekhaya ezi-3 eziziphethe kakuhle EZINGALINGWA ziigusha.
Kufuneka i-4x4 phakathi kukaOktobha noAprili
Kwaye kucetyiswa phakathi kuka-Epreli no-Oktobha.
I-Cae Canol Bach, isete i-100m ngaphantsi kweFama yaseCae Canol, ibonelela ngendawo ethandekayo, yothando, kude-kuyo yonke indawo ukutshaja kwakhona ezo bhetri zidiniweyo. Imi kumazantsi entaba iManod, indlela yokufikelela ikwisiqingatha sekhilomitha sendlela yentaba enamasango ecaleni kweNtlambo iTeigl kumhlaba weefama oqengqelekayo neegusha ezitya ingca. Le ndawo yokufihla epholileyo ibonelela ngegumbi lokulala elinegalari ye-mezzanine ngaphezulu kwesicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala evulekileyo enesitovu esibaswa ngamaplanga, ikhitshi langoku, kunye negumbi lokuhlambela. Awusoze uzive usondele kwindalo ngoko wenza apha: iya kuhlala emphefumlweni wakho ngonaphakade. Uya kuziva usisigidi seemayile kude kuyo yonke into, entliziyweni yelizwe elingenakonakala, ujikelezwe yiPaki yeSizwe ye-Snowdonia, enemibono eyolulela elunxwemeni nakwi-Llyn Peninsula.
Igumbi lokulala eli-1 laseMEZZANINE: (kwileli enqatyisiweyo yenqanawa enomzila wesandla) enebhedi ephindwe kabini enokufikelela kwelinye icala, kunye noomatrasi omnye owongezelelweyo. Zikhona ilinen yokulala kunye nesomisi seenwele.
UMDLALO KUNYE NESItulo Esikhulu: Iyafumaneka ngesicelo
ILINEN YEBED : Ibandakanyiwe
IITHWELELI: Ngeli xesha, ngenxa yemithetho ye-Covid, sicela iindwendwe ziziphathele iitawuli zazo, i-BATH MAT, iitawuli zeti kunye ne-Oveni.
Igumbi lokuhlambela / iWC eneshawa yombane (ezantsi).
Igumbi lokuhlala kunye ne-KHISHI: Ikhitshi efakelwe i-oveni yombane kunye ne-hob, ifriji-ifriji, i-dishwasher kunye ne-microwave. Itafile nezitulo. Iiracks zokomisa iimpahla, izixhobo zokucoca kunye nesicoci sokufunxa zinikezelwe.
INDAWO YOKUHLALA: Ibhedi enye, isofa ephindwe kabini, isitshisi somthi kunye ne-TV/DVD/RADIO/CD.
IGUMBI LOKUSEBENZA: I-Cae Canol Bach inokufikelela kwigumbi eliluncedo ekwabelwana ngalo (umgama oyi-100m) elibekwe kwi-'Lean to' encanyathiselwe kwiCae Canol Cottage, eligcwele ngomatshini wokuhlamba, i-tumble dryer, iirakhi zokomisa, intsimbi, isikhenkcezisi, ivenkile yelog, ifenitshala yegadi. kunye neethoyi zaselwandle. Iipropati ezintathu zinokufikelela kweli gumbi loncedo ekwabelwana ngalo: iCae Canol Cottage, iCae Canol Farmhouse kunye neCae Canol Bach.
IINDLELA: Ukuhlala ngaphambili kunye nefenitshala yegadi ecaleni kwendlu yangasese. Nceda uqaphele ukuba imihlaba yeyentaba kwaye yendalo. Abantwana abancinci kufuneka babekwe esweni ngalo lonke ixesha.
I-PETS: Samkela izilwanyana ezi-3 eziziphethe kakuhle ezingahendwayo ziigusha ezitya ukuya kutsho kumnyango wangaphambili. Izinja kufuneka zilawulwe ngamaxesha onke xa kumhlaba wamafama. Nangona kunjalo, kuya kubakho intlawulo eyongezelelweyo ye-£ 20 ngesilwanyana ngasinye. Kufuneka usixelele ukuba uza nezinja eholideyini nawe xa ubhukisha. Sizakongeza intlawulo yomlawuli ekubhukisheni kwakho.
UKUPAKA: Indawo yokupaka eyaneleyo ngase cottage. Indawo yokutshaja isithuthi sombane ekhoyo.
UKUSHISA: Isifudumezi sombane esifakwe eludongeni kunye nesitovu sokutshisa ilogi, kunye neplagi eyongezelelweyo ezaliswe ngeoyile kwiiradiyetha ezifumanekayo xa uceliwe.
UMBANE & UKUSHISA: Ibandakanyiwe. Iilogi kunye nokuvuthwa kufumaneka ngexabiso elongezelelweyo le-£6 inye ngebhegi. Nceda ujonge ukufumaneka.
AMANZI: I-cottage inokubonelela ngamanzi emithombo yasentabeni ahluzwayo kwaye anyangwe nge-UV.
I-WIFI: Okwangoku akukho nxibelelwano lwe-wifi. Unokufumana isibonakaliso esihle kakhulu se-4G kunye nabo bonke ababoneleli ngaphandle kweVodafone.
Ukujonga indawo yendawo:
Hamba ngokwenyani ukusuka kumphezulu womnyango, kunye nendlela yeenyawo yamandulo (ngoku engafane isetyenziswe) esuka eCae Clyd ukuya eCwm Penmachno edlula ucango lwangaphambili kule ndawo yase 'Wild Wales'. Jonga iCrimea yokudlula, kwaye uhambe ngeendlela ezijikeleze iManod Quarries - edume njengekhaya leNational Galleries efihliweyo ubuncwane bobugcisa ngexesha lemfazwe yehlabathi yesibini. Ukuloba echibini kunye nomlambo kungalungiselelwa ukuhlala kwakho, kunye neemvume ezifumaneka ngeCambrian Angling.
Umgama oziikhilomitha ezi-2 kwilali yaseLlan Ffestiniog enevenkile yasekhaya, kunye ne-Y Pengwern pub yoluntu ekhonza i-ale yokwenyani kunye nokutya okukhulu. Ukuze ufumane amava kaloliwe onomphunga ongaphelelwa lixesha, ungaqala uhambo lwakho ngololiwe iFfestiniog kunye neWelsh Highland ukusuka eBlaenau Ffestiniog (iikhilomitha ezi-5) apho uya kufumana iindawo zokutya, iivenkile ezinkulu kunye nezinto ezithathwayo.
Kubantu abafuna imincili, iZip World: Titan, Bounce Ngasezantsi kwetrampoline networks, kunye neAntur Stiniog mountain biking zonke zifikeleleka lula.
Ukuhamba okufutshane yidolophu enezibuko lasePorthmadog kunye nelali entle yaseBorth Y Gest enesanti, apho unokuthi uqale khona uhambo lwakho ngendlela eselunxwemeni ngembono phezu kwechweba elisingise ePortmeirion (iikhilomitha ezili-11). I-Black Rock Sands (iikhilomitha ezili-13) ikuvumela ukuba uqhube ngokuthe ngqo kwiimayile ezi-3 zesanti kunye neendunduma kwaye ukuba ungazihenda kude ngakumbi, ndwendwela iHarlech Castle (iikhilomitha ezili-14), iSwallow Falls kunye neBetws y Coed (iikhilomitha ezili-15) e. intlambo yeConwy, iziko lebhayisekile leentaba zeCoed y Brenin (iikhilomitha ezili-16) kunye neLlanberis emazantsi e-Snowdon (iikhilomitha ezingama-30).
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam kuyo nayiphi na kwezi zilandelayo: